Taratasy fampidirana | RayHaber | raillynews
HomeRailway NewsNahoana?Avoahy ny fampidirana!
Avoahy ny fampidirana!
Vidiny fampiroboroboana 2020 - Ho an'ny orinasa Tiorka
Dokambarotra White Paper
Izy io dia fitambaran'ireo doka sy fampahalalana. Ny firafitry ny teny advertorial dia avy amin'ny fitambaran'ny "doka" sy ny "editorial". Rehefa manao dokambarotra advertorial ho an'ny vokatra na serivisy rehetra dia mikendry ny hanatratra izany fampahalalana izany miaraka amin'ireo mpihaino kendrena izany. Koa satria ao anatin'ny vanim-potoana an-tserasera isika, ny mpisolo doka amin'ny advertorial fa tsy doka fanoratana fotsiny dia misy fiantraikany amin'ny mpanjifa sy ny mpijery. Noho izany, tena avo be ny fiverenan'ny doka advertorial.
Adiresy / Adika
No Type ad fanambarana saran'ny
3.1 Isan'andro (1 unit) Lahatsoratra, sary ary rohy, lahatsoratra tsy azo itokisana Dofollow £ 150
3.2 Herinandro (3 entana) Lahatsoratra, sary ary rohy, lahatsoratra tsy azo itokisana Dofollow £ 400
3.3 Volana (12 unit) Lahatsoratra, sary ary rohy, lahatsoratra tsy azo itokisana Dofollow £ 1.500
Ho ohatra santionany amin'ny fampiroboroboana Tsindrio eto!
Ny vidiny dia tsy misy ny VAT ho an'ny doka rehetra.
Ny rohy ao amin'ny lahatsoratra momba ny fampiroboroboana dia tokony ho betsaka amin'ny 3.
Sary 5 na horonantsary 1 ekena.
Tsy ekena ny filokana, filokana, lahatsoratra fampiroboroboana mihoatra ny 18 taona.
Famoahana taratasy fotsy
Ny fampidiranao fifandraisana @rayhaber.com Azonao atao ny mandefa izany amin'ny adiresinay na afaka mifandray aminay amin'ny laharana finday etsy ambany ianao.
Aorian'ny famoahana ny taratasy fampidirana dia alefa any amin'ny mpanjifa ny rohy fanontana. Ny ampitson'iny aorian'ny fisavana, ny fandoavam-bola dia raisina amina famindram-bola na fandoavam-bola any PayPal.
Ny fandoavam-bola dia raisina ao anaty fonosana isan-kerinandro sy isam-bolana.
@: mifandray @rayhaber.com
Vaovao 2020 Vaovaon'ny Advertorial (Gazetiko) - Tsy orinasa Tiorka
Izy io dia ny fampahafantarana vaovao miaraka amin'ny dokam-barotra. Ny firafitry ny teny advertorial dia nalaina avy tamin'ny fampiarahana ny teny "doka" sy ny "editorial". Na dia manao dokam-barotra advertorial ho an'ny vokatra na serivisy aza dia mikendry ny hanatratra izany amin'ireo mpihaino kendrena misy ny vaovao. Koa satria ao anatin'ny vanim-potoana an-tserasera isika, ny fifandraisan'ny dokambarotra advertorial fa tsy ny doka fanoratana fotsiny no misy fiantraikany amin'ny mpamaky sy ny mpihaino kendrena kokoa. Noho izany antony izany, somary avo be ny fiverenan'ny dokambarotra advertorial.
Vaovao momba ny Advertorial / famoahana gazety
No Type ad Description Vidiny (isaky ny doka)
3.1 Isan'andro (1 anarana) Text, image and link, tsy tapitra mihitsy i Dofollow 75 EUR
3.2 Herinandro (doka 3) Text, image and link, tsy tapitra mihitsy i Dofollow 200 EUR
3.3 Volana (dokambarotra 12) Text, image and link, tsy tapitra mihitsy i Dofollow 750 EUR
Tsindrio Eto ho an'ny santionany!
Tsy tafiditra ny VAT.
Betsaka, filokana, votoaty fampiroboroboana +18 dia tsy ekena.
Alefaso amin'ny advertorial anao ny fifandraisana @rayhaber.com na afaka mifandray aminay ianao.
Aorian'ny famoahana ny doka dia alefa any amin'ny mpanjifa ny rohy fanontana. Ny ampitson'iny aorian'ny fisavana, ny fandoavam-bola dia raisina ho toy ny fandefasana ny banky na ny fandoavam-bola any PayPal.
Fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra nosoratana tamin'ny rindrina Nostalgic Tram Garage ao Düzce
Vaovao Aydınlı momba ny famoahana maharitra ny fiara Cable niverina
RAYİHALE dia mandefa ny fampisehoana iraisam-pirenena amin'ny fiara fitaterana (SPECIAL NEWS)
Hanokatra mivantana mivantana ny tranokalan'ny toby Yıldırım
SEO lahatsoratra momba ny fampiroboroboana RayHaber
Arslan Minisitry ny "Central lalovan'ny Corridor ho any Torkia miaraka amin'ny Central Register" Article Raillif ho ...
Ny lahatsoratra ao amin'ny General Manager Apaydın dia navoaka tao amin'ny Raillife Magazine "Konya Gets YHT Station"
Fampahafantarana momba ny tolotra: Fialana an-tongotra mandeha an-tongotra mankany amin'ny station Yazihan
Nihaona tamin'ireo fiarandalamby i Bursa
Sampan-draharaham-pahaizana manokana Polat Özbek nampidirina an-dalambe
Amin'ny firy no hampidirina fiara an-trano? Fampitàna mivantana Rahoviana?
Fanamarihana Tender: Fivakiana mpandeha an-tongotra vaovao mankany amin'ny lalana ambanin'ny mpandeha an-tongotra ao amin'ny gara Malatya…
Ny mpandeha an-tongotra mandeha amin'ny fampiharana mivantana ny fiaramanidina